Home Wararka Maxkamad kutaala Uganda oo soo saartay go’aan ku saabsan Soomaalida
Maxkamad kutaala Uganda oo soo saartay go’aan ku saabsan Soomaalida
Maxkamadda sare ee magaalada Kampala ayaa ku amartay xafiiska socdaalka ee Uganda, in dadka asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya la siiyo dhalashada Uganda hadii ay buuxinayaan shuruudaha sharciga Uganda.
Xukunka oo uu soo saaray garsoore Musa Ssekaana ayaa kadanmbeeyay, dacwad ay sannadkii 2019-kii gudbiyeen 7 xubnood oo ka tirsan Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Uganda iyo ururrada bulshada rayidka ah, iyagoo kacabanaya mas’uuliyiinta Uganda oo u diiday dhalashada dalkaasi Uganda.
Xubnaha dacwadda gudbiyay ayaa kala ah ; Abdu Abucar Hussein, Abdullah Ahmed Shiek, Yahaya Yusuf, Xirsi Mohamed, Abdinassir Hussein Shire, Mohamed Abduwel Abdulla, Ahmed Noor Osman iyo Multiracial Community Uganda (MCU) Ltd, dadkan ayaa intooda badan noolashoda kunoolaa dalka Uganda.
Arrintan ayaa waxaa ay war faraxad leh utahay dadka soomaaliyeed ee kunool Uganda.
Previous articleUganda oo Soomaaliya u soo dirtay Ciidamo ka qeyb qaata howlgalka ATMIS
Next articleFaallo: UAE Ma Jidkii hore ayey Mari Doontaa Misa Waxbey ka Baran Doontaa?
(Xogta Rasmiga ah) Sidee ku yimid qorshaha booqashada Farmaajo ee Hargeysa,...
Dadaalka Farmajo iyo Kheyre ee ku Meeleynta Reerahooda hay’adaha Dowladda Doorashada...